Tarot eMadrid | Ukusasazeka kobuso ngobuso kunye nokusasazeka kwekhadi kwi-Intanethi | 2019
38 Ukufundwa kweMin
I-Tarot kwidolophu yaseMadrid kukukhangela okuhle kwabo bakomkhulu laseSpain. Ukusukela njalo kwaye kuzo zonke iimeko kukho amawaka kunye namawaka abantu abathi kwiinjini zokukhangela kwiwebhu bazame ukufumana izangoma. Ngamanye amaxesha ngempumelelo, abanye bephoxekile, kulapho sikhona. Ukuhlengahlengisa inkqubo, kuxhomekeke kwinjini yokukhangela yobuqu.
0.1 Ndifumana phi itotot eMadrid okanye oosiyazi eMadrid?
0.2 I-Tarot kwizimvo zaseMadrid
1 Owona gqirha ulungileyo eMadrid
2 Konke malunga ne-tarot eMadrid
3 Yintoni ongayaziyo malunga nababona beMadrid
4 Inkonzo ePhambili yePsychic eMadrid
5 Ukudibana okuhle kunye nexabiso eliphantsi
5.1 Ziya kukhethwa nini ii-psychics ezilungileyo kwikomkhulu laseSpain?
5.2 Zeziphi izinto ekufuneka zithathelwe ingqalelo. Ukuhlala kunye netarot kwikomkhulu laseSpain?
5.3 Yintoni injongo yokufumana iTarot elungileyo?
6 I-Tarot yeTuTarotGratis.ku-intanethi
7 Ulwazi malunga neyona psychics kunye neetarot zabafundi eMadrid
8 Ubungqina kunye neembono zeTarot eMadrid
9 Yintoni injongo yeemboni?
10 Amathandabuzo xa uqesha isangoma
11 Kutheni iimboni zethu zilungile?
12 Kutheni ungafumani ezinye izangoma ezilungileyo kwaye uhlale nathi?
12.1 Iimboni zokuzithemba kwidolophu yaseMadrid
12.2 Kuza kwenzeka ntoni? Akukho nto uya kuba nayo impendulo oyilindeleyo.
13 Beka amakhadi eMadrid Centro
14 Ukunyuka kothando kwikomkhulu laseSpain
14.1 Oko kubizwa ngokuba zizibophelelo zothando ngamakhubalo okanye kwimisitho eyenziwa xa ujonge ukubanethuba lesibini kunye nomntu omthandayo.
15 I-TAROT E-MADRID SIQHELE UKULUNGISA NOKUPHUCULA
16 Iimboni ezaziwayo nezaziwayo kwidolophu yaseMadrid
Ndifumana phi itotot eMadrid okanye oosiyazi eMadrid?
Fumana i-psychic efanelekileyo kwidolophu yaseMadrid. Inokuba ngumsebenzi olula ukuba sibhenela kwezona injini zokukhangela zibalaseleyo kwiminwe yethu.
Okokuqala, ukubanakho ukwabelana ngeenkolelo kunye nokuqokelela ulwazi kubalulekile. Kuya kufuneka sithathele ingqalelo into yokuba kukho uninzi lweengcali. Ngoobani ababandakanyeka ekwenzeni iitarot ziqhutywa ngokungekho mthethweni.
Umntu oneshishini, uneengxelo ezithile kunye nendawo ahlala kuyo. Ngokukodwa. I-Tarot ayisiyonto uyithandayo, sisipho ekufuneka siyinyani kwaye kwabelwane ngaso.
Ukubeka ubomi bethu kulawulo lomnye umntu. Kufuneka ibe linyathelo elibalulekileyo, ke ngoko kufuneka siqinisekise. Sele ngaphambi kokungena kothethwano okanye ngomnxeba.
Abona baboni balungileyo kwikomkhulu laseSpain okanye eyona ibalaseleyo. Baye bachongwa ngokokubona kwabo kunye nomsebenzi olungileyo, i-tarot bubomi babo. Kwaye ke bazinikele emzimbeni nasemphefumlweni womsebenzisi ngamnye.
Ngezwi lakho nje kunye nemibuzo emibini ephambili siya kuyazi. Nokuba le psychic ingumntu oyingcali okanye hayi.
Iimboni zinonxibelelwano olulodwa. Ngomhlaba owenza ukuba babone ngakumbi kunaye nabani na. Okwangoku, okudlulileyo kunye nekamva ayisiyongxaki kuye. Ngale ndlela inokusinceda sazi ngakumbi malunga nendlela ekufuneka siyithathile.
Leyo yindlela amazwi akhe aya kusichaphazela ngayo ukuba siqiniseke. Ukuba sinxibelelana neyona psychic ibalaseleyo. Kunye ne-clairvoyance evela kwikomkhulu laseSpain kukhuseleko lwethu.
I-Tarot kwizimvo zaseMadrid
Abafundi be-tarot kwikomkhulu laseSpain baziwa njengeyona nto ibalaseleyo elizweni. Inyani yile yokuba imihla ngemihla abantu abaninzi baya kwikomkhulu okanye banxibelelana nabo. Ngomnxeba kunye neenkonzo zezi ngcali.
UMaria wayengumntu osebenza yedwa. Ukuba wayephuke ubuso kwiintsuku ezimbalwa kunye neqabane lakhe lakudala.
Emva kobudlelwane beminyaka eli-13, wayeqala indlela yeentloni. Ndibuyele ekhaya kunye nenkuthazo. Ukufumana iqabane lakho nomnye umntu.
Iplanethi yakhe yawa phambi kwamehlo akhe. Kwaye wayenokuzama kuphela ukwakha ubomi bakhe kwakhona.
Uye wayiphatha ngesandla ngeyona intle, uthathe iphone wahlala phantsi. Ecaleni kwebhedi, ndilinde umntu ophendule umnxeba ukuba akwazi ukumqonda.
Ngamazwi amabini nje, uMaria wayesazi ukuba uyifumene le nto ebeyikhangela.
Ukusukela ngoko ubomi bakhe bathatha ithuba elingamakhulu amathathu anamashumi amathandathu okujika. Wayekwazi ukulibala ixesha elidlulileyo elibuhlungu elalimmakeleyo.
Njengoko imboni yamxelela, wadlula kwisithili awayesicebisile. Kwaye apho wafumana uthando lobomi bakhe, yonke into awayeyilindile.
Uthando oluqolileyo kunye nolunomdla olumgcwalisa ngamandla. Ndimnceda ukuba abuye azicingele.
UMaria wayengakholelwa kwiimboni. Kodwa ngoku sikulungele ukubuyela nanini na xa kukho imfuneko yoko.
Izidingo zokufumana i-psychic kunye nenombolo yakhe.
Isidingo sokufumana ababonisi ngamanani sisivumela ukuba sinxibelelane ngqo nomntu okwelinye icala.
Yindlela ethe ngqo yokuqalisa incoko kwaye ube naloo mzuzu woxolo nokuzola esikudingayo.
Amanani ama-clairvoyants aqhagamshela ngokuthe ngqo kwikhabhinethi yawo yobungcali. Iphawulwe ngokuzimisela kunye nobuchule obuya kusishiya singathethi.
Owona gqirha ulungileyo eMadrid
Akukho malunga nokuphendula kunye nokufumana umsebenzisi ukuba athenge inkonzo. Imalunga nokunceda umntu onexesha elibi. Kwaye ufuna ingcali kule ndawo.
I-Clairvoyance ngumsebenzi ofuna uninzi lweengqondo kunye nokwazi. Umnxeba sesinye isixhobo. Ukwenza umntu ukuba azole kwaye afumane iimpendulo azifunayo.
Ukuba sifuna ukufumana ifowuni yengqondo elungileyo. Kungcono ubhenele kwiinkonzo ezizodwa okanye ufumane izalathiso ezilungileyo.
Kwiplanethi apho uninzi luninzi kungcono ukuba ucace gca. Izidingo zethu kunye namathemba okusoloko sifuna olona khetho lufanelekileyo phantsi kwazo zonke iimeko.
Fumana imboni elungileyo ngeenkolelo kwaye ubuze inombolo yakhe.
Uluvo lokukhangela oosiyazi.
UJuan wagqiba kwelokuba akhangele imboni kwinethiwekhi, wayeneenkolelo ezininzi. Iifowuni ezininzi kangangokuba wayengazi ukuba makenze ntoni, wayenokuqhubeka nokudideka.
Kude kube ngumzuzu xa ngolunye usuku ethathe isigqibo sokuya kwelinye inyathelo kwaye akhangele iphepha elikhethekileyo. Kuyo wafumana eyona ilungileyo tarotists ezilungileyo kwikomkhulu Spain. Ngokulula nangokulula.
Ukongeza koku, babalisa amava athile angakhange ayenze ukuba azole ngakumbi. Ukuba akunjalo, wafumana inkuthazo echanekileyo yokufowuna kwangoko.
Le ndoda ilungileyo uJuan wayesazi ukuba ukukhangela oosiyazi ngekhe kube ngumsebenzi olula. Kodwa kwafuneka eyenzile ukuze abuphucule ubomi bakhe.
Wayeneshishini nomhlobo wakhe owayebonakala ngathi uza kutshona.
Ndandityala imali veki nganye ndingafumani mbuyekezo. Ugcino lwakhe beluphelile kwaye nomosisi kunye nabo.
Wayesele eza kuphulukana nekhaya lakhe kunye nendawo awayeyilwele kakhulu. Ngokuqinisekileyo akukho mntu wayebonakala eyiqonda imeko yakhe, nokuba uphi na. Kwakukho iminyango kuphela evaliweyo.
Ukuphelelwa lithemba kwakhe kwakukukhulu kangangokuba wayengasayazi enye into anokuyenza. Kude kube mzuzu wagqiba kwelokuba afumane imboni. Wenza ngokufihlakeleyo emfazini wakhe, nangona kamva wamxelela ngayo.
Ngosuku uJuan ancokole ngalo kunye ne-clairvoyant, bakhala ngovuyo. Ngomzuzu ngamnye kunye nomzuzu ombi ngaphezulu, ukwehla kwakhe ekutshatyalalisweni kumiswe ngesiquphe kwaye kwaqala ukubhatala.
Konke malunga ne-tarot eMadrid
I-tarot kwikomkhulu laseSpain kunye nabadlali bayo be-tarot elungileyo yindawo apho baveliswa khona. Olona thethwano lubalaseleyo kwilizwe. Bubugcisa obumiselweyo. Kwaye baninzi abantu abajika imihla ngemihla.
Akukho nto iphosakeleyo ngokwenza ufundo lwe-tarot ngaphezulu. Ichanekileyo kakhulu ukuba sifuna ukwazi ukuba yeyiphi indlela ekufuneka sihambe ngayo ebomini.
Ikomkhulu laseSpain ligcwele ababonisi kunye nabantu abafuna ukuba. Ngenxa yoko, kufuneka sazi kakuhle ukuba sikhetha eyiphi.
Kweli phepha sikunika nganye yedatha echanekileyo.
Ukufumana abafundi be-tarot abaphambili kwikomkhulu laseSpain.
Umntu ngamnye kufuneka abe nemboni ecaleni kwakhe ngalo lonke ixesha. Ukuze akwazi ukukuqonda kwaye akunike yonke into oyifunayo.
Ayisiyondlela yokudlulisa nje ixesha okanye ukwazisa abanye. Umsebenzi wethu wokuzonwabisa ngumsebenzi onobuzaza ngokwenene. Ukuba kufanelekile ukuba aphathwe ngeyona ndlela ibalaseleyo.
Kukho iindawo apho i-tarot yindlela yokufumana imali ebantwini. Kufuneka sisabe ngokukhawuleza kolu didi lweemboni.
Ukonwabela i-tarot kwikomkhulu laseSpain sikunika abantu. Banomsebenzi omiselweyo kwaye bakwazile ukugqwesa kule ndawo ngendlela ekhethekileyo.
Sikunika ubungqina obuyinyani ukuze uqonde ngokwakho. Sisiphi isizathu sabathengi benkonzo ukuba bathathe le meko inzima, zeziphi izinto eziyimfuneko kubo. Ukwenza kunye nendlela ababutshintshe ngayo ubomi babo.
Iminqweno yeTarot kwikomkhulu laseSpain
Iinqwenela zetarot kunye nokufundwa kwamakhadi kwikomkhulu laseSpain
Sele uyazi ukuba i-tarot bubugcisa obudala obusekwe kufundo. Amakhadi njengesixhobo sokudibanisa namandla ahambisa umhlaba.
Zive kuthethathethwano ngalunye kunye nokuba bazikhokela kwaye bazibeka njani. Ukubonelela umsebenzisi ngamava asemgangathweni, akukho ndleko.
Itotot ineendlela ezininzi. Ideksi nganye inezinto ezithile ezinxibeleleneyo nezobuchwephesha obusebenzisayo.
Kungoko ke kuthunywa lokuqala oluyimfuneko ukukhetha umgangatho oya kusebenza kakuhle. Ngesini somxhasi wenkonzo ophambi kwakho, ayifanani nganye. Ngokwenyani ngalinye lahlukile.
Emva kokuchwetheza kwamakhadi, umsebenzi olungileyo wegcisa ufihliwe. Ngubani ozisebenzisayo ukuba kufuneka ajonge olo nxibelelwano luchanekileyo ukuze umqulu wenziwe ngokuchanekileyo kwaye uncede umsebenzisi.
Owona gqirha ubalaseleyo esixekweni saseMadrid banesitshixo sempumelelo ezandleni zabo: kufuneka babeke abantu phambi kwabo okanye kwelinye icala lefowuni. Fumana iimpendulo ozifunayo.
Sinye kuphela isisombululo esinokubakho kwisicombululo ngasinye. Fumana abadlali be-tarot abalungileyo abaziingcali kwiplanethi yetarot. Kwaye banokwenza umqulu oza kutshintsha ubomi bomntu ngokupheleleyo.
Yintoni ongayaziyo malunga nababona beMadrid
Iimboni zekomkhulu laseSpain zihlala zihlala kwaye kuzo zonke iimeko zilinde ezona ndaba zamva nje. Kule ntsimi, bahlala kwaye ngamaxesha onke bafumana indlela eyiyo. Ukubonelela abathengi bayo ngeyona nkonzo ibalaseleyo.
Kukho uthotho lweendaba esiza kukuxelela.
Ukuyithetha kuqala loo nto, ubuchule obahluka ngakumbi kwaye ngqo. Olunye ukhetho onalo kumbuzo ngamnye, amathuba okufumana iziphumo ezinqwenelekayo.
Okulandelayo, iirhafu zezona zikhuphisana kakhulu kwintengiso. Imalunga nokuseka indleko ezithile kwimveliso nganye. Kodwa ukuyiqhelanisa nabafakizicelo okanye abasebenzisi abanqwenela ukuzifumana kwinkonzo yethu.
Inkonzo ePhambili yePsychic eMadrid
Olona khuphiswano lusebenza kakhulu kwaye lusebenza kakuhle kwintengiso yesizwe.
Ukuba imboni ilungile, iya kubonisa izipho zayo kwindawo apho inokuya khona. Ukufumana abathengi abaninzi kule meko iMadrid sisixeko esikhethwe ngabo.
Xelela ukuba kukho ezinye iindaba ezibaluleke ngakumbi esiqiniseke ngazo. Oko kuya kukumangaza ngendlela ongayilindelanga.
Kukho indlela yokuba nayo yonke into oyifunayo kunye nokwenza idinga. Ngoyena ugqirha ubalaseleyo eMadrid. Ihlabathi liphela lamathuba lilindelwe kwaye linokuthetha. Ngaphambi nasemva kubomi bakho bemihla ngemihla.
Ukudibana okuhle kunye nexabiso eliphantsi
Ziya kukhethwa nini ii-psychics ezilungileyo kwikomkhulu laseSpain?
Iingqondo ezigqwesileyo kwi-capital yaseSpain ziya kukhethwa ngabasebenzisi ngokwabo. Yintoni oyityayo kwaye ucinga ngokucela ingcali.
Uphengululo olulungileyo lufezekiswa ngolawulo olululo. Kwaye kukho ikhadi elifanelekileyo. Ngokufunda nje amagqabantshintshi abantu abaye bathatha isigqibo. Ukuya kwiinkonzo zaba bantu sifumana umbono wokuba balunge kangakanani.
Inyani yile yokuba akukho lula ukufumana umfundi olungileyo we-tarot. Kodwa kuxa sibhenela kwinkqubo efanelekileyo.
Amaphepha anje azele ulwazi kunye neengcebiso ezilungileyo. Ziyindlela efanelekileyo yokuqinisekisa ukuba sifumana isisombululo esifanelekileyo.
Kule ndawo sizabalazela okona kulungileyo. Ngenxa yokuba sibeka ikamva lethu ngqo ezandleni zalo mntu.
Sivula inxenye yentliziyo yethu kuye, sichaze uloyiko lwethu. Siyavuya, siyahleka, siyakhala kwaye sithatha isikrweqe semihla ngemihla.
Ukukhetha abafundi abafanelekileyo be-tarot kuxhomekeke kuwe kuphela. Kwidolophu yaseMadrid ikunika iplanethi yamathuba kwizandla zakho kwaye kukuwe ukufezekisa.
Enye inyani inokwenzeka, enye indlela ikulindile. Kufuneka ukhwele kuloliwe ofanelekileyo okusa kuyo. Fumana ii-psychics ezilungileyo kwikomkhulu laseSpain kwaye ukhethe okona kulungileyo.
Zeziphi izinto ekufuneka zithathelwe ingqalelo. Ukuhlala kunye netarot kwikomkhulu laseSpain?
Kukho uthotho lwezinto eziphambili eziza kwenza ukuba sikhethe itarot kwidolophu yaseMadrid. Bhala phantsi nganye nganye kakuhle, uya kuba khumbula. Ngexesha elithile ubukhe wabakho. Siza kusombulula amathandabuzo akho.
-Ubungcali: ikomkhulu laseSpain likomkhulu lelizwe, isixeko esineenkcubeko zonke. Apho kudibana khona iingcali ezifanelekileyo kunye neengcali ebaleni.
Akukho nto singenakukufumana apho kwaye ke. Siza kubuyela kwesi sixeko okoko nje kufanelekile.
Khetha kweyona ingcali. Ilula ukuba sibhenela kwiindlela ezichanekileyo.
-Ukuqonda: Isixeko esinezigidi zabantu siya kusinika ukuqonda esikudingayo. Asifuni mntu ufuna ukwazi ngobomi bethu babucala nangaphantsi. Abo bantu banokuthi basazi okanye bathethe ngathi.
Kwikomkhulu laseSpain sinesiqinisekiso. Imfihlo kunye neyona ndlela ilula yokuqhubeka.
-Ukujonga okona kulungileyo: ikomkhulu laseSpain linababonisi ababalaseleyo abafumanekayo kubasebenzisi balo kwaye, ngamafutshane, ukufezekisa indima yabo ngeyona ndlela ibalaseleyo.
Kwiplanethi yeemboni, kufuneka sithathele ingqalelo umgangatho abasinika wona kunye namandla alo mhlaba.
Ezona zilungileyo kwidolophu yaseMadrid njengoko kulapho elona nani likhulu lababonisi abaziingcali begxile kwicandelo abalifunayo.
Yintoni injongo yokufumana iTarot elungileyo?
Eyona njongo iphambili yokufumana iTarot elungileyo kukuba ube nokufikelela ekuphelisweni kwamathandabuzo akhoyo onokuba nawo.
Kukuphazamiseka okuye kwavela ebomini bakho kwaye kuvelisa uzinzo.
Le ndlela iphazanyiswe ngesiquphe, apho kubonakala ngathi ayinakubuya, kodwa ngoncedo lwemboni ebalaseleyo kweli lizwe, inokujamelana nemeko.
I-tarot sisixhobo esisiseko seemboni. Ekuqeshweni nasekucaciseni ezi leta ngundoqo wempumelelo. Singalufezekisa olo nxibelelwano kunye nendalo yonke ebavumela ukuba babe nazo zonke iimpendulo abazifunayo kwindawo abanokufikelela kuyo.
Enye indlela yokugcina i-vibes yakho engqondweni kukukwazi ukuzifumana okanye hayi.
Injongo yokufumana i-tarot efanelekileyo kukuba neempendulo ezichanekileyo kwiingxaki zemihla ngemihla. Ke ngoko, kufuneka ibe ngumsebenzi ojolise kwiimvakalelo zethu.
Ngamanye amaxesha, sinokuba ne-intuition ephawula thina okanye umkhondo wokuba yonke into izakulunga.
Kwi-tarot kufuneka sicinge ukuba ukufumana okona kulungileyo kunokwenzeka. Kweli phepha unokufumana iimpendulo zamathandabuzo akho aphambili akhoyo. Kwaye ubuza ukuba awuzange uthathe isigqibo sokucela ingcali ngaphambili.
Injongo yetarot yethu kukufumana ezona mboni ziphambili sinokuthi sifikelele kuzo.
Njengabaxhasi benkonzo, sinokuhlala sikhetha ezona zilungele iimfuno zethu esinazo kuzo zonke iimeko. Ke ngoko, akufuneki ukuba sikhathazeke malunga nexesha elityaliweyo ekufumaneni ezona zilungileyo.
Ababonisi be dolophu yaseMadrid basinika iplanethi yamathuba anokusivumela ukuba sikhethe. Olukhetho ngakumbi, kokukhona kukho ukuphazamiseka xa usenza isigqibo. Eyona ndlela yokusombulula iingxaki zethu ngokuchanekileyo. .
Amagama angapheliyo eendlela kunye neemodeli onokukhetha kuzo. Iya kusivumela ukuba sihlale sinomntu ekubhekiswa kuye oza kusixhasa ngalo lonke ixesha.
Akukho nto esingenako ukuyisombulula ngokubuyela umva, sinokujonga olona khetho lufanelekileyo ukuba sikhokelwa zizimvo zesalathiso ukuze sikwazi ukufikelela kwelona khadi lifanelekileyo.
I-tarot yethu iya kuba yodwa kwaye iyodwa kuthi, oko kukuthi, akuyi kubakho mandla alinganayo, ngokuqinisekileyo akukho mntu uya kukwazi ukuthatha indawo yesazisi.
Iileta ziya kuthetha nje kwimeko kwaye ziya kusixelela oko sifuna ukukuva. Akukho nto bangakwaziyo ukuyiphendula, kukufumana nje indlela yokuphendula.
Imibuzo emide kakhulu okanye eneempendulo ezinokudida ayicetyiswa. Cwangcisa iseshoni yakho yetarot kakuhle.
Ulwazi malunga neyona psychics kunye neetarot zabafundi eMadrid
Iingqondo ezigqwesileyo ngabo banamaphepha ewebhu amahle. Kwaye abo bafumana ulwazi ngakumbi bahlala bethetha.
Abantu bathetha ngayo yonke into eyenzekayo kubo kwaye ukuba bonelisekile yinkonzo abayifumeneyo. Uya kufumana izimvo ezakhayo eziya kwenza ukuba isisombululo sibe lula ngakumbi.
Idatha esiyiqokelela kwezinye iiwebhusayithi okanye izimvo. Inxulumene noko masifumane umbono wento esinokuyifumana.
Kwelinye icala, amava anelisayo aya kusenza sizithembe ngakumbi. Ekuseleni kwaye ube nesizathu esincinci sokwenza umbuzo.
Iindaba zisenza siphonononge inqanaba loqeqesho lomntu ngamnye.
I-clairvoyant elungileyo ngulowo unabaxhasi beenkonzo asebenza kubo. Into ayenzayo ibanika uvuyo olukhulu kwaye iyamnceda ukusombulula iingxaki zangaphakathi anazo.
Kuya kufuneka sithathele ingqalelo into yokuba imboni nganye isebenzisa ubuchule obahlukileyo kwaye isinike italente yazo.
Ndizimisele ukukubonelela ngeyona tarot intle kwikomkhulu laseSpain, ethembekileyo kunye nokuzithemba ngaphandle kokwenza iinzame.
Injongo yethu kukukunika eyona tarot intle kwikomkhulu laseSpain. Ngenxa yento yokuba sicinga ukuba ufanelwe kokona kulungileyo kwaye kwezi zinto kuhlala kufuneka ukhangele. Inketho efanelekileyo kwiimfuno zethu.
Imboni nganye ineempawu kwaye inokuseka unxibelelwano olwahlukileyo. Ngomntu ofuna iinkonzo zakho nokuba akukho ngaphandle kwendleko.
Ukuba ufuna umntu omthembileyo sikunika isisombululo. Imboni eya kukuqonda kwaye iya kubeka ubuchule bayo ezandleni zakho. Ukuqinisekisa ukuba iingxaki okanye amathandabuzo akho ayaphela.
Siyazi ukuba kubaluleke kangakanani kumaxesha athile ebomini ukuzixhobisa nabantu abafanelekileyo, kwiplanethi apho yonke into ihamba ngokukhawuleza, ukubanakho ukuba namaphepha afana neli laseMpuma sisiqabu esikhulu.
Awuzukunyanzeleka ukuba wenze nawuphi na umzamo owongezelelweyo ukufuna ngaphezulu
Apha unayo yonke into oyifunayo ukufumana ababonisi ababalaseleyo elizweni.
Aba ngabantu abakulungeleyo ukujongana nayo nayiphi na imeko. Ama-tarotist ahloniphekileyo kwindawo yakho ngokucofa nje, umnxeba okanye umbuzo.
Unesisombululo kumathandabuzo akho, lixesha lokuba unxibelelane nabona babonisi ababalaseleyo kwikomkhulu laseSpain. Kwaye ubeke isiphelo kwelo nqanaba okanye imeko yobomi bakho ekukhathaza kakhulu.
Ubungqina kunye neembono zeTarot eMadrid
UJuan noMaría ngabantu aba-2 ngomzuzu wabo. Baye bagqiba kwelokuba banxibelelane nababonisi ababalaseleyo kwikomkhulu laseSpain, kodwa baninzi ngakumbi.
UPedro wayengumntu olahlekileyo kwiplanethi apho yonke into yayibonakala inkulu kuye. Ukudakumba kwakungapheliyo ebomini bakhe. Akukho nto yenzekileyo njengoko wayecinga kwaye ibonakala imiselwe ukusilela ngokupheleleyo.
Ngenye imini walifumana eli phepha kwaye wagqiba kwelokuba azame ukwenza into ngobomi bakhe. Uqokelele isibindi sakhe kwaye wakubeka okuncinci kuye. Ngezwi elaphukileyo kwaye kunzima nokuba akwazi ukubiza amagama ama-2 kunye, wabiza abona badlali babalaseleyo kwi-capital yaseSpain.
Kwimizuzwana embalwa wayenokuthula kwaye wakwazi ukwenza uthethathethwano lokuqala ngokulula.
Amagama aloo mfazi wayengamazi kwaphela afikelela emphefumlweni wakhe, kumele ukuba wanyamezela iinyembezi amaxesha amaninzi.
UPedro wothuka, ngaloo mini kwatshintsha into ngonaphakade. Ithamsanqa lakhe laqala ukwehla, wayengasafani ncam nomntu owayefana naye ngaphambili, wayengumntu owahluke ngokupheleleyo.
Okwangoku, uPedro ukhumbula la mava kwigumbi lokuhlala lakhe elitsha ngelixa ecinga ngamehlo onyana wakhe kwaye ezibuza ukuba kutheni engazange athathe isigqibo sokutyelela ababonisi kwikomkhulu laseSpain ngaphambili. Uyindoda entsha enkosi kwi-tarot.
Uhlalutyo lwamangqina ngako konke ukunethezeka kunye neenkcukacha njengesiseko esiphambili setarot kwikomkhulu laseSpain
UPedro, uMaría noJuan, kodwa baninzi abantu abakwazileyo ukwenza utshintsho olukhulu kubomi babo ngenxa yababonisi ababalaseleyo kwikomkhulu laseSpain.
U-Adelina wayengumfazi ophakathi, ezele iintlungu, wayehlala yedwa, kuba abantwana bakhe babezimele ixesha elithile.
Ubomi bakhe bothando buyintlekele yokwenyani kwaye ebengasebenzi ngaphezulu kwenyanga. Waziva ediniwe kwaye elahlekile kwaphela.
Wayengaziva nantoni na, wayenokuhlala ekhaya abukele iintlungu zakhe, ephindaphinda. Ukundwendwela ugqirha qho ngeveki zange kusombulule nantoni na, babekhonza kuphela ukuqhubekeka nokumnyanga kunye nokwandisa ixesha lekhefu lokugula.
Ugqirha wamfumana kutyelelo oluqhelekileyo lwemizuzu emi-5 kwaye wamthumela ekhaya.
Ubomi babungathi buphumelele umdlalo phezu kuka-Adelina, de kwaba lusuku apho omnye wabahlobo bakhe emchazela ngeendaba zabona babonisi ababalaseleyo edolophini yaseMadrid.
Kwakunomdla kuye kwaye wayekholelwa ukuba akukho nto aza kuphulukana nayo. Utyelelo lokuqala lwalubuhlungu, umfazi owayengamazi konke konke wachaza ukuba yintoni le ingalunganga ngaye.
Uyiphikile inyani ixesha elide kangangokuba xa wayenayo phambi kwakhe akazange akwazi ukuyichonga. Ukusukela ngoko, u-Adelina akakhange afune gqirha kwaye unabafana abaninzi, ungutitshala wemidaniso yesiLatin kwaye wonwabele ubomi obupheleleyo.
Yintoni injongo yeemboni?
Iinjongo zababonisi ababalaseleyo edolophini yaseMadrid zicacile. Baziingcali kwinkonzo yabathengi babo, ababandakanyekayo kwimeko nganye de bafikelele kwimpumelelo.
Utyelelo kunye ne-clairvoyant alupheli xa umntu eshiya umnyango, kukho ukulandelelana, umdla wokwazi ukukhula kofundo lwe-tarot.
Ababona iimboni abafuna ukuzityebisa, bafuna ukutshintsha ubomi babantu ababuyela kubo.
-Utshintsho oluqinisekileyo. Kukho abantu abafuna utshintsho oluqinisekileyo, inkuthazo eyongezelelweyo kunye nokuqhelaniswa nobomi obutsha.
Oosiyazi bekomkhulu laseSpain banakho kwaye baya kuyenza kuba becinga ukuba umsebenzi wabo kukuzisa utshintsho olululo.
- Ngokuqinisekileyo. Amathandabuzo ngabachasi abakhulu beengqondo, xa kuvela intandabuzo, umbuzo ongasombululekiyo uvelisa isifo esinokuba ngumbhali wezifo ezikhulu zobuqu nezomzimba. Oosiyazi bethu bacinga ukuba kuya kufuneka ugqibe ukubonisana ngaphandle kwamathandabuzo.
Ubungcali obuphezulu. Abantu abakulungeleyo ukujongana nayo nayiphi na imeko, abancokolayo abakhulu abaya kuthi baqinisekise amagama achanekileyo, baya kukuqonda kwaye baya kuyazi indlela yokukunceda kuba banobuchule obugqwesileyo.
Uluvo kubabonisi bethu
Iinkolelo zikaJuan, uMaría, uPedro noAdelina ziyisampulu yeenkonzo ezintle ezenziweyo ngababonisi bethu. Kukho amaphepha azele ziimvakalelo, iimvakalelo kunye nothando oluninzi.
Imihla ngemihla baninzi abo bathatha isigqibo sokuqhubeka nokubeka izimvo ngemeko yabo entsha, babhale ii-imeyile okanye babize abo babonisi abavela kwidolophu yaseMadrid ababancede kakhulu.
Umbulelo yindlela yokuqinisa amandla akho, uzive uphumelele ngokupheleleyo emsebenzini wakho, usazi ukuba amazwi akho ayakwazi ukwenza umntu okwimeko eethe-ethe enze.
UAna wayengumfazi osemngciphekweni wokwahlula, wayekrokrela ukuba umyeni wakhe wayekunye nomnye, nangona wayengafuni ukumbona ngamehlo. Ukungathandabuzeki kwamhlasela imihla ngemihla, de kube ngumzuzu xa wagqiba ekubeni ahambe emva kweengqondo ezigqwesileyo kwikomkhulu laseSpain.
Ngokukhawuleza wayesazi ukuba enze ntoni, ngeentsuku ezimbalwa waqhawula umtshato kwaye emva kweenyanga ezimbalwa uthando lwavela emnyango wakhe. Wayeqinisekile ukuba akukho nto imbi izakwenzeka kwaye yiyo loo nto wayenamandla afanelekileyo okwenza into ekufuneka eyenzile, ngaphandle koloyiko kunye nokuzola okupheleleyo.
Amathandabuzo xa uqesha isangoma
Ukuthandabuza xa uqesha i-psychic kuqhelekile. Kwaye kuqhelekile kunokuba sicinga. Sihlaselwa yinto yokuba siphambi kwemeko eyi-9 ngokupheleleyo.
Kufuneka sibeke ubomi bethu kulawulo lomntu. Oko asazi kwaye uya kwazi kwangoko iingxaki zethu.
Ukuhlazeka yinto esemgangathweni oqhelekileyo.Uya kucinga ntoni ngam? Umbuzo omkhulu ngamnye wethu ubuzayo. Impendulo kukuba iimboni zethu azikhe zinike uluvo okanye zigwebe nantoni na okanye akukho mntu kwaphela. Zizingcali ezikhethekileyo ekusombululeni iingxaki zabathengi bazo.
Bayakuqinisekisa kuphela oko iileta zingqina kubo, ngaphandle kokucamngca okanye ukuthetha kuphela. Awunakukhathazeka ngombono. Okanye uluvo olucingelwayo olunalo ngawe.
Zisetyenziselwa ukujongana nazo zonke iintlobo zamatyala. Kwaye eyakho mhlawumbi ayimbi kangako njengoko ucinga.
Kufana nexesha lokuqala lokuya kugqirha okanye ukutshintsha iingcali. Siziva silahlekile ekuqaleni, kodwa kungekudala siyabona ukuba yeyona nto ingcono esinokuyenza.
Ngababonisi ababalaseleyo bedolophu yaseMadrid uya kuziva. Kanye ngokungathi uthetha nomntu omaziyo unaphakade.
Kutheni iimboni zethu zilungile?
Iimboni zethu zilungile kuba zifumene isipho esikhethekileyo, ebesihamba naso iminyaka emininzi. Ziingcali ekwenzeni iimpendulo zetarot zaziwe. Ukongeza koku, bayayazi ngokugqibeleleyo indlela yokuphatha abo basebenzisa iinkonzo zabo.
Bahlulwe phakathi kwezinye iimboni ngobizo lwabo kunye nomyolelo wabo. Ukusuka kokuya kwabanye, kukho abantu abazalwa benempawu ezithile. Oko kubenza bahluke ziimboni zokuzithemba okupheleleyo.
Abazi ngasiphi esinye isizathu ekufuneka besenzile ngexesha lokuphila kwabo. Ngokwenza izipho zabo zifumaneke kwabanye.
Iingqondo ezilungileyo zedolophu yaseMadrid aziqhelekanga.
Ngawona magcisa kunye neengcali esixekweni. Uyakwazi ukufikelela kwiziphumo ezilungileyo ukusuka kusuku lokuqala lweentsuku. Baza kuba nakho ukusombulula amathandabuzo abathengi babo malunga nenkonzo kwaye babancede bazi ikamva. Ukushiya ngasemva kwexesha elidlulileyo elingayi kuba nanto yakwenza neentsuku ezizayo.
Abantu ababuyela kubo banombulelo ngokusisigxina. Ngokuzifumana kwaye wonwabele amava awodwa. Oko kubanike uzinzo abalufunayo.
Ukuba ufumanisa ukuba ulahlekile okanye kwinqanaba ongalilindelanga ebomini bakho. Banokukunceda kwaye bagqibezele kube kanye kunye nolo hlobo lwe-gust embi ekukhathazayo. Owona gqirha ubalaseleyo kwikomkhulu laseSpain balapha ukukunceda.
Kutheni ungafumani ezinye izangoma ezilungileyo kwaye uhlale nathi?
Ukufumana ezona ndawo zibalaseleyo zengqondo kwikomkhulu laseSpain. Awunyanzelekanga ukuba ukhangele, kunye nabo unayo yonke into oyifunayo ukufezekisa inkqubela phambili yobuqu.
Iimboni zokuzithemba kwidolophu yaseMadrid
Ngawona magcisa akhethekileyo. Ayisiba nesipho esahlukileyo kuphela kodwa bayayazi nendlela yokusisebenzisa ngokugqibeleleyo.
Kukho abantu abaneempawu ezintle kodwa bazisebenzisela inzuzo yabo. Izidiliya zethu ziyisebenzisela ukwenza inzuzo kubomi babanye.
Bahlala kwaye ngamaxesha onke bezama ukufumana ezona ziphumo zibalaseleyo ngaphandle kwexesha lokubonisana. Abafuni ukuba nabathengi beenkonzo ezizinzileyo. Ngabathengi abonelisekileyo benkonzo kwaye bambalwa abaza kutyelela ngcono. Ewe kuya kuthetha ukuba bazifezekisile iinjongo zabo.
Umntu ngamnye kwikomkhulu laseSpain unendlela aqhubeke nayo.
Indawo apho baya kuziva bekhululekile kwaye baya kuba nakho ukuphucula amandla abo.
Owona ogqirha abalungileyo kwikomkhulu laseSpain ngokungathandabuzekiyo baguqula i-lignite kwiidayimani ezimsulwa. Bayakwazi ukupholisha nokuqaqambisa imeko ebonakala imnyama. Ngaphezulu kunokuba kugcwele ukukhanya.
Ukuba uzibona usebumnyameni kwaye ungazi ukuba yintoni enye onokuyenza, apha uza kufumana isisombululo. Indlela elula nelula ngaphandle kwenkathalo, kuya kufuneka ubize okanye ukuba ufuna ukubuza kube kanye. Uya kubona ukuba yonke into itshintsha njani ngendlela emangalisayo.
Amabinzana esiphindaphinda kaninzi ukufumana itarot eMadrid.
Kutheni ujonge kwitoti?
Kuza kwenzeka ntoni?
Baza kundenza ntoni apho?
Ngaba ndiza kukwazi ukusombulula iingxaki zam?
Kwaye njl njl njl.
Ndikhangela itarot eMadrid ngenene
Kuqhelekile ukuba namathandabuzo ngaphambi kokubhenela kwiinkonzo zengcali kwilizwe le-tarot, kweli phepha siza kuzisombulula zonke.
Kutheni ubhenela kumfundi we-tarot? Ngenxa yendlela ekhawulezayo nelula yokusombulula nayiphi na intandabuzo yakho.
Kufuneka uphakamise nje umbuzo ofanelekileyo, yintoni ekukhathazayo kwaye ulinde indawo yokuphendula. Uya kumangaliswa kukwazi izinto ezininzi ngawe, kodwa iya kuba yile nto uyifunayo ukuba ufuna ukuphelisa ukuthandabuza.
Kuza kwenzeka ntoni? Akukho nto uya kuba nayo impendulo oyilindeleyo.
Baza kundenza ntoni apho? Baza kukumamela kwaye baphendule imibuzo yakho ngendlela efanelekileyo. Uya kuyibona indlela onayo ngayo ukuba nentlalontle ngokumamela nje ilizwi lakhe. Intuthuzelo kunye nonxibelelwano olusekwe ngumlingo.
Ndingazisombulula iingxaki zam? Impendulo icacile EWE, akukho nto iya kuba ntsha njengangaphambili, iimpendulo ziya kukunceda uye phambili kwaye ucace malunga neenjongo zakho. Owona gqirha ubalaseleyo kwikomkhulu laseSpain bazi ngokugqibeleleyo into abayenzayo kunye nendlela abanokukukhokela ngayo ngendlela eya kukothusa.
Ezi zintathu zokugqibela ndizigqibileyo ziqheleke ngokubanzi. Ke ngoko banokuba kuluhlu kodwa sigxile. E-Madrid ukukhangela kwendawo kuya kuba ngqo
I-Tarot eMadrid ilungile
Ndifuna iTarot esemthethweni eMadrid
I-Tarot eMadrid yokuzithemba
Imboni yeNyaniso eMadrid
Ndikhangela itarot eMadrid
Iifowuni zeTarot eMadrid
I-Tarot kudliwanondlebe lwaseMadrid
UkuFundwa kweeleta eMadrid
Ababona kakuhle eMadrid
Tarot eMadrid Simahla
Tarot eMadrid uMyolelo
Abadlali abalungileyo be-tarot eMadrid
Iimboni ezilungileyo eMadrid
UJulia kunye ne-tarot yakhe ungomnye weemboni zethu. Abaququzeleli abasebenza kwidolophu yaseMadrid ngokusisigxina
U-Julia ngumntu owahlukileyo kakhulu, ukususela kwiminyaka emncinci kakhulu weva umnxeba wesipho sakhe. Amaphupha okuqala okuqala aqala ebuntwaneni bakhe. Njengomntu olungileyo osebenzelana nemimoya, wayenoluvo lwesithandathu lokuba ubuncinci wayelinde ukufika kwakhe.
Uchithe ubuntwana bakhe esoyika ukufumanisa lonke ulwazi analo. Ngokukhula kwam, ndaziva ukuba loo mvakalelo ibetha ngamandla kwaye isomelela kunokuba ndithelekelela ukwabelana ngeemvakalelo zayo nomhlaba. Amava obuqu atshintshe yonke into ngonaphakade.
Xa wayekwishumi elivisayo kumbhiyozo wadibana nomntu, wathi xa emchukumisa ukuze amange ama-2, waziva ephola kamnandi emzimbeni wakhe.
Wothuka wabe umntu ophambi kwakhe engaphezulu. Wayebonakala onwabile, wayeyinkwenkwe entle kwaye ezele bubomi, kodwa imboni kaJulia ayizange iyeke ukucinga ngale mvakalelo. Uye kwigumbi lokuhlambela ukuzama ukuzola, kodwa akukho nto inokuthintela ukubetha kwentliziyo yakhe ngendlela engaqhelekanga.
Ngosuku olulandelayo emva kokuba umntu elele efile, uzibulele. Ngokuqinisekileyo akukho mntu, nguJulia kuphela owayenokwazi into engalunganga.
Ukusukela ngala mhla wagqiba kwelokuba azinikezele kwi-tarot kunye ne-clairvoyance ngokupheleleyo ukunqanda ukuba akukho mntu wumbi uziva ethe cwaka.
abadlali elungileyo tarot kwikomkhulu Spain
UAna María ngomnye wabathengi bakhe. UJulia uyingelosi egcinayo, xa utata wam waswelekayo ndilahlekile ngokupheleleyo, bendinokucamngca ngobulolo bam.
Undixelele ukuba kuzofika into entle wandichazela ukuba izobanjani. Amazwi akhe azalisekiswe ngokugqibeleleyo, ndifumene umntu otshintshe ubomi bam.
Ngoku ndinosapho lwam, ndaye ndagqiba kwelokuba ndibize intombi yam yokuqala, uJulia, njengomntu owayendincede kakhulu kuninzi.
Ngoku lo mfundi we-tarot kunye nomhlobo phantse yinxalenye ebalulekileyo yosapho lwam. Ndiyamthanda ngentliziyo yam kwaye ndiya kuba nombulelo ongunaphakade ngento andenzele yona. Enkosi ngokuba yindlela oyiyo.
Ungathanda ukukhwela eqongeni? kule tarot Lo ngumboniso wezona zengqondo zibalaseleyo, ulingo kwaye Ngaba le yenye yeenjongo zakho ukuba nobugqi kwaye ngakumbi ukucwangcisa ikamva?
Ngaba ndifuna imboni edolophini yaseMadrid ngoku?
Iyavakala, abasebenzisi bethu bafuna kakhulu, sibazi kakuhle ngoku, kulungile, kulungile, siza kuba negalelo kule webhusayithi yindawo efanelekileyo yokubaleka kubantu abayifunayo ngoku nangoku.
Ngaba awazi ukuba uyifumana phi itarot?
Bhalisela incwadana yetarot, sifuna ukuba nengcebiso yobudlelwane esiza kukunika yona le tarot yahlukile kwenye yezo unokufikelela kuzo senza izinto ngokuchanekileyo, siza kuthetha ngayo yonke into esiyenzayo ngokungathi khange ibekho.
Ingaba iimboni zichanekile? Ndidiniwe ziimboni?
oomatshini bemboni bayakudika bayakwazi ukwenza kwaye abandicengi, leyo yimfazwe yemihla ngemihla imboni engasoze izame ukukhohlisa
Yintoni oza kuyazi! Ufikile apha siyazi ukuba kuhlala kunjalo kwaye kuzo zonke iimeko zisisiseko. Enye yezona zinto zibaluleke kakhulu ekufuneka siziqwalasele ngakumbi ukuba sinetarot efanelekileyo. Luluvo, khumbula ukuba kanye xa kungekho mntu uya kubuyisa imali yakho ngenxa yoko unike ingqalelo.
Ukwaziwa kakhulu ukuba ziimboni akwenzi ukuba iimboni zizodwa.
(Njengoko uza kwazi iimboni ezingaziwayo. Iyavakala ngakumbi, umahluko kuphela kutyalo-mali kwintengiso kodwa ayinanto yakwenza nomgangatho)
Chaza imibono yezengqondo
Amagama ababoni ekulula ukuwakhumbula
Amagama abonisa umdla kakhulu
Awona magama alungileyo oosiyazi ukukhumbula
Ngaphandle kweemboni nganye ezibeka amagama azo ngokuthanda. Abanye bobuxoki ukuze singaze silibale. Uninzi lunabaphulaphuli kodwa inyani yile siyenzayo kukunxibelelana nawe.
Asifuni ukukunika igama kuphela, kodwa eligama liyinyani kwaye liqhelekile kubantu abakweli phepha nakwimboni yethu yeenkwenkwezi, igama liyi-Esmeralda Planos. Kukho iimboni zokwenyani kwaye unazo nemali encinci
Ngaphandle kokukhetha, kwaye unike iziphumo ukuze uphinde uphinde ubuye ezi ziingcinga zethu. Ukuze uyeke ukubhala kwethu. Asifuni ukugxeka, senza ngathi siyaphendula, siyenze ingakholeki kwaye sahluke ngobuchule kunye nokuqala.
Beka amakhadi eMadrid Centro
Wakhula kwintsapho ekhuselekileyo kwisithili sedolophu.
Wayenobomi obuzele yimpumelelo kunye nempumelelo enkulu, waphumelela kwikholeji kwaye watshata, elandela izikhokelo zento ebefanele ukuyenza ngobomi bakhe. Ngaphaya kwazo zonke ezi ndibano. U-Estrella wayenento ngaphakathi kuye ekwakufuneka aphume.
Ngenye imini indawo yokuhlala amakhadi e-tarot. Kwakufana nesityhilelo.
Wasebenza, kwabonakala ngathi le nto ingaphiliyo ibimxelela into. Yaqala ukubakho ngesandla seengcali eziphambili kwaye imidyarho yokuqala yafumanisa ukuba inento eyahlukileyo.
Abahlobo bakhe babengabokuqala ukuphonononga izipho zakhe ezintle. Umhlobo wakhe u-Ana wayebonakala engumntu ophilileyo kwaye onamandla, kodwa kwiileta zakhe wafumanisa ukuba isifo besisondele.
Estrella waba Heroine yakhe. Ukusuka kuloo mzuzu wagqiba kwelokuba aqale ukudala ikhabhinethi yakhe, emiselwe ukuya kuzo zonke el mundo ukuba baya kuyidinga.
U-Estrella ngumhlobo wam, kodwa kunye ne-heroine yam.
Yile ndlela uAlvaro amchaza ngayo njengendoda eselula engaphantsi kweminyaka engamashumi amabini ubudala kwaye ongumthengi wenkonzo enelungelo lomfundi we-tarot.
U-Alvaro wayehlala kusapho olunengxaki ezinzima kwaye wagqiba kwelokuba afune indlela yokuphelisa ingxoxo nganye kunye neentshukumo ezimbi ezenzekileyo.
Wadibana no-Estrella ngengozi kwaye kwakungathi ubona ukukhanya kude.
Umboni, umfazi onamava, wamamkela eofisini yakhe wamnceda ukuba alwe nemiqobo esendleleni.
Okwangoku, u-Alvaro ufunda umthetho kwaye rhoqo ngeempelaveki utyelela abazali bakhe abagqibe kwelokuba bavuselele izifungo zabo kwaye bazame uthando olungunaphakade kwakhona.
Ndikhetha eyiphi imboni? U-Elisa ulungile kwaye uzinikezele kwaye unokufumana ukhetho oluthembekileyo
U-Elisa imboni ngumfazi omncinci ogcwele amandla. Ngayo loo mini usuku nosuku uyaphakama enenkohliso yokutshintsha umhlaba omngqongileyo.
Unamava obomi azele ziimpawu ezenza ukuba abe ngumntu owahlukileyo. Kuba wayemncinci wahlakulela uhlobo lwendalo ebonakalayo. Uvela kusapho apho abasetyhini banesipho esibonisa bona.
Unina noninakhulu bamfundisa indlela yokulawula amandla amoyikisayo njengomntwana. Wayekwazi ukubona ngaphaya kweengqondo zakhe. Yiva amandla ahamba emzimbeni wakho ngendlela eyothusayo.
Bona, abantu ababhinqileyo kwindalo yakhe babephethe ukumxelela. Indlela afanele aziphathe ngayo, yintoni abantu abaza kuyidinga kuye.
U-Elisa wayecacisile kwasebuncinaneni
Umsebenzi wobomi yayikukuba nekhabhathi yakhe indawo anokucebisa ngayo abanye. Unebhodi ekhaya apho abhala khona izivakalisi ezikhuthazayo. Kwaye apho axhoma khona ngamnye kunye nomyalezo ngamnye awufumana mihla le.
Ungomnye woosiyazi abafumana ukuvuyisana nomsebenzi wakhe. Kubutshintshe ngokwenene ubomi babantu abaninzi. Ukuba uluhlu lwamagama kwiiposikhadi zakho lukhulu.
U-Elisa wabelana ngempumelelo yakhe kunye nosapho kwaye uziva onwabe ngokunzulu. Ukuze ukwazi ukwenza eyona nto inceda abantu, yabelana ngezipho zabo.
UMaría José ngomnye wabathengi bakhe abonelisekileyo.
Xa wayesemncinci wawela kwiplanethi yezinto ezimbi. Kwaye inkampani embi engamvumeliyo ukuba aphume.
Wayexinekile kwaye engakwazi ukubuphatha ubomi bakhe, wafikelela kwimeko engaginyisi mathe de wadibana no-Elisa. Ngaphambi kokuba afike kudliwanondlebe naye wayesele eza kuthatha ubomi bakhe, kodwa akayenzanga kuba wayesazi ukuba ikhona enye into.
U-Elisa wamnika nje ukuba ambone, wayeyazi kakuhle intlungu yaloo mfazi.
UMaría José uyangqina ukuba amagama akanyanzelekanga, uyazi ngokujonga nje ukuba kwenzeka ntoni kum kunye nendlela endifanele ukwenza ngayo. Ungumboni oyinyani kwaye ungatsho ukuba uyenza ngentliziyo yakhe yonke.
Umboni kufanelekile: Musa ukuthandabuza uSilvia wedolophu emsulwa, ecacileyo nezelwe yaseMadrid
USilvia ungomnye wabafundi abalungileyo be-tarot. Amehlo akhe angena ngaphakathi, unamehlo akhulula nawuphina umphefumlo.
Ukusukela oko wayeyintombazana encinci, wayesazi ukuba kufuneka enze okuthile ngamandla akhe. Wayengakwazi nje ukuqikelela ikamva ngokulula. Kodwa ukongeza koku amakhadi e-tarot ayefana.
Imihla ngemihla wayeziqhelanisa kude kube sezinzulwini zobusuku, eshukunyiswa yimikhosi angayaziyo. Bonke ubomi bakhe babonakala buvela ngqo kwincwadi yamabali esayensi. USilvia mihla le wayenabantu ababodwa, ababetsalwa ngamandla abo.
Ngesinye isihlandlo, umngqibi owayecela isipho esitratweni wawela indlela yakhe. USilvia wamqonda, wayesazi ukuba kukho into eyahlukileyo ngaleya ndoda. Waya kwivenkile ekufuphi wamthengela iphedi yomzobo nepensile.
Umngqibi wothuka, kodwa wambulela ngesi senzo.
Kwiinyanga ezimbalwa lo mceli wayeseTV. Ingcali yezobugcisa yayityelele esixekweni ngaloo mini, wothuswa yimizobo yakhe. Okwangoku ungumculi owaziwayo ogama lakhe linguSilvia alifuni ukufumanisa.
Iziganeko zenzeka ngokungalindelekanga kwaye yiyo loo nto uSilvia ethathe isigqibo sokuseka ikhabhinethi yakhe. Ukuze abo bantu bayifunayo bakwazi ukuya kuyo.
UJuana ngumfazi owayengacacanga malunga nobizo lwakhe, owona mnqweno wakhe yayikukuba ngumama ngazo zonke iindleko kwaye wayezama iminyaka.
Kwakungekho ndlela, oogqirha babengazi ukuba mabenze ntoni na.
Ngenye imini wagqiba kwelokuba abuyele kuSilvia kuba babethethe naye kakuhle ngaye.
Kuthathe kuphela ukusasazeka kwekhadi kunye namagama aphambili ama-2. Ukufumana iimvakalelo zikaJuana.
Wakhupha yonke into embi eyayingaphakathi kuye kwaye washiya esona sithuba. Ukuze ubomi obutsha buqale ukubonakala. Oogqirha bancokola ngommangaliso kaJuana. Wayesazi kakuhle ukuba izandla zikaSilvia zazigqibile.
Ukunyuka kothando kwikomkhulu laseSpain
Okwangoku sihlobene ngothando nomnye umntu. Kungokwemvelo ukuba ii-avatat ziyaphuma kwaye ngamanye amaxesha ubudlelwane buyaphela.
Ngesi sizathu, ukuba ubudlelwane bakho buya ezantsi okanye bulahlekile. Ukuba uziva ngathi izinto ziye zabanda okanye zikude kwaye awusiqondi isizathu sokuba uthando lobomi bakho, umntu omthandayo nomthandayo kule planethi, azikhwebule kuwe okanye angahambelani neemvakalelo zakho nangona ukuba uzabalazela yonke imihla ukufumana ingqalelo yabo kunye nokutsala umdla wabo.
Kunokwenzeka ukuba ulwalamano lwakho lusondele esiphelweni. Kwaye yinto ekufuneka uqale ngokujongana nayo ngaphambi kwexesha.
Nokuba kutheni le nto olu lwalamano lusondela esiphelweni, eyona nto inoxanduva lwakho kukujongana nayo kwaye ufumane iindlela zokuqinisekisa ukuba oku akwenzeki.
Ukuba inqaku lelokuba sele uzame yonke into onokufikelela kuyo kwaye awuboni enye indlela ngaphandle kokuvalelisa okulusizi, kuhlala kukho amaxesha ngamaxesha nangakumbi, njengekhadi lasendle, onokulisebenzisa ukubuyisa uthando lwakho .
Phambi kokuba ubhenele kuthando lothando, kufuneka uqiniseke ukuba le kuphela kwendlela ekufuneka ubuyekeze ngayo ukungabikho kothando ohamba kulo, kwaye kufuneka ucacise isizathu sokuba kutheni ufuna ukwenza kwaye ucamngce rhoqo kwaye kuzo zonke iimeko kunye Intliziyo.
Izibophelelo zothando kufuneka zenziwe xa omnye umntu ethandwa kakhulu kwaye izixhobo eziqhelekileyo zigqityiwe.
Oko kubizwa ngokuba zizibophelelo zothando ngamakhubalo okanye kwimisitho eyenziwa xa ujonge ukubanethuba lesibini kunye nomntu omthandayo.
Olu hambo luthatha ingcambu kweyona mvakalelo inyulu nebalaseleyo enokubakho: uthando.
La mandla anamandla kangangokuba anokusetyenziselwa zombini iziphumo ezintle, ke ngenxa yeentlekele ezinkulu. Ngamaxesha onke nangamaxesha onke, ukugcina izinto zoomabophe abenziwe ngomlingo omhlophe, abo bazama ukusebenzisa la mandla othando olusulungekileyo njengomthombo wempembelelo, ngokuchasene nomlingo omnyama onokuba yingozi kwaye unokudala umonakalo omkhulu kuthi.
Ukuthathela ingqalelo oku, kubalulekile ukuba wazi malunga nobukho beentlobo ezahlukeneyo zeetayi, ukubuyisa iqabane lakho langaphambili, ukubuyisa iqabane elilahlekileyo, ukuphinda uqalise ubudlelwane obuphazamisekileyo okanye ulungiselele umntu ovulekileyo intliziyo yakhe kuwe zama umdla owawungenawo ngaphambili.
Injalo imeko kaPaola, owayengumfazi owonwabileyo emtshatweni okanye ubuncinci ngale ndlela wayikholelwa ekuqaleni, kodwa ngexesha lomtshato wakhe, izinto zaba mnyama ngakumbi.
Babesele benabantwana abancinci aba-2 kwaye, nangona umyeni wakhe engazange abe ngutata ombi. Ukuba wayengumntu onesingqisho esingaqhelekanga sobomi, wayechitha yonke imihla esela kwiindawo zentselo nakwiidisco, wayephuma ngokuqhubekayo nabahlobo bakhe kwaye wayeqhele ukubuyela ekhaya kwimizuzu embalwa emva kokusa, uhlala ekuyo yonke indawo. ukunxila kunye nokuziphatha okwaliwa nguPaola kakhulu.
Ukudinwa kule patheni kunye nokuba kufuneka ukukopela. Rhoqo kubantwana bakhe ukukhusela igama likayise
U-Paola wafumana intlebendwane yokuba umyeni wakhe ngoku wayemqhatha nomnye umfazi. Yeyiphi into yokugqibela uPaola anokuyinyamezela malunga noku.
Ukunikezela kule meko kwaye ukoyisiswe ngumfanekiso wokubona awona maphupha akhe makhulu. Ezo zineentsapho ezonwabileyo, ezikhathazekile kukuziphatha okungathandabuzekiyo komyeni wakhe. UPaola wagqiba kwelokuba alandele iingcebiso zodadewabo kwaye atyelele imboni eyaziwayo kwikomkhulu laseSpain.
I-TAROT E-MADRID SIQHELE UKULUNGISA NOKUPHUCULA
UPaola wamcacisela imeko yakhe eneenyembezi, ebalisa yonke into ayiphilayo kwaye emamele ngaphandle. Kwakubuhlungu kakhulu okwamenza wacinga ukuba umtshato wakhe uphelile. Kuba andisakwazi ukuyithatha kwakhona.
Nangona kunjalo, imboni eofisini yakhe yayinobubele kwaye yayiqonda kakuhle indlela awayeziva ngayo uPaola, kuba yena, ngokwamava akhe, wayekhe wakwimeko efanayo.
Apho athathe isigqibo sokumcebisa ngento ekufuneka eyenzile.
Ngokukodwa lo Paola wasebenzisa ihempe yomyeni wakhe eyacelwa yimboni kwaye baqhubeka nokwenza iqhina lothando. Ukutshintsha indlela aziphethe ngayo umyeni wakhe kwaye umkhokelele ekubeni yindoda enenkathalo notata omiliselwe ngakumbi kubomi bosapho obuqhelekileyo.
KuPaola kwakumangalisa kakhulu ukuba isimo sengqondo somyeni wakhe sitshintshe kakhulu.
Ukusukela eli nyathelo lokuphuma ubusuku nobusuku ukuyenza kunqabile inyanga kwaye kungabikho kwaphela, kwaye wazi iimfuno zomfazi wakhe kunye nokukhulisa abantwana babo.
Kude kube namhlanje, uPaola noCamilo sele beneminyaka elishumi betshatile. Kwaye ukusukela ngalaa mzuzu ukuya phambili, oku kube ngumzekelo womyeni notata.
Njengoko ubona kweli bali, iqhina likaPaola liqinisekisile ubudlelwane bakhe kunye nokuzinikela komyeni wakhe. Oku kwenzeka ngenxa yokuba babenesiseko sobudlelwane obudala obugcwele uthando kwaye ngenxa yokuba uPaola wancedisa ngoncedo lomboni kunye nengcali ebalulekileyo kwikomkhulu laseSpain.
Ngubani oye wadlula kwinto enye kwaye wazibona ngale ndlela inye ebonakaliswa nguPaola. Apho athe wagqiba kwelokuba enze owona msebenzi mhle naye kwaye ngale ndlela abe nakho ukumnceda.
UPaola akahlali ethetha ngale nto, kodwa kumalungu akufutshane osapho, njengoodadewabo, libali elaziwayo.
Namhlanje zininzi izinto ezithandwayo zokwenza uthando. Yintoni esinokuyenza ukusuka kukuzola kunye nokuthuthuzela kwamakhaya ethu
Kodwa oku kunqabile kakhulu ukuba kusebenze. Kwaye unokufumana iziphumo ngokuchasene nezo zazinqwenelwa ekuqaleni.
Kungenxa yesi sizathu sokuba, ngalo mzuzu uxabise ukwenza itayi yothando kwikomkhulu laseSpain, nangona igumbi lokuhlala kwikhaya lakho linokuvakala njengenketho elungileyo, eyona nto ikrelekrele kakhulu kuzo zonke iimeko iya kuba kukuya kumboni oqeqeshiweyo onolwazi malunga nento eyenzayo, angasiqonda njengomhlobo othandekayo kwaye asiqinisekise ngokugqwesa.
Iimboni ezaziwayo nezaziwayo kwidolophu yaseMadrid
Kwikomkhulu laseSpain singafumana abalinganiswa abaninzi abaziwayo nabaziwayo, nokuba bakwimo elungileyo okanye embi.
Kwelinye icala, sinababoni abaphumeleleyo kwiintliziyo zabantu abaninzi
Ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuba bazithathe njenge. "Inxalenye yosapho lwakhe." "Ingelosi ewile ezulwini". "Ingelosi engumgcini." "Utitshala". "Isikhokelo" kunye neyona nto imnandi kuzo zonke. "Umhlobo".
Kwaye, kwelinye icala, kukho abo bazinikezele kuphela ekuhlekiseni ngabantu ngexesha labo elingenamandla lokuswela, bengamaxoki abazinika umsebenzi wokuthetha naliphi na inani lamagama ukoyisa abantu ngokungathi bakhupha iipokotho zabo.
Ngesi sizathu, kubalulekile ukusebenzisa oosiyazi abaziwayo kuso sonke isixeko saseMadrid, kuba ukuba inyanisile kwaye ilungile, iya kwaziwa kwaye ithandwe eluntwini lwabantu abaqhubeka nokubonisana netarot.